သြစတြေးလျ Labradoodle အကြောင်းသင်ဘာတွေသိထားရမလဲ - Breeds
သြစတြေးလျ Labradoodle - ဖောင်းပွမှုရထိုက်သောအခြားဒီဇိုင်နာတစ်မျိုးရှိသည်။
ခွေးတစ်ကောင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပုံပန်းသဏ္doာန်အမျိုးမျိုးထွက်နေပြီးခွေးတွေဟာဒီမျိုးကွဲတွေကိုသတိထားရမယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သြစတြေးလျ Labradoodle ကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ၎င်းတို့အကြောင်းကိုလေ့လာရန်အချိန်ယူပါ။
မူလအစ: သြစတြေးလျ Labradoodle သမိုင်း
Australian Labradoodle ဘယ်လိုပုံလဲ။
သြစတြေးလျ Labradoodle ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
သြစတြေးလျ Labradoodle ကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ
Labစတြေးလျ Labradoodle သည်ကျန်းမာသောခွေးလား။
သြစတြေးလျား Labradoodle ကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ။
သီးသန့်ကလပ်များသည်သြစတြေးလျ Labradoodles ကိုအာရုံစိုက်သည်
သြစတြေးလျ Labradoodle ကိုအခြား Doodles နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ငါဘာကြောင့်သြစတြေးလျ Labradoodle ကိုဝယ်သင့်သလဲ။
Aussie Labradoodle သည်အတူတူဖြစ်သည်ဟုပြောရန်လွယ်ကူသည် စံ Labradoodle ။ တစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်ကတော့သင်သည်၎င်းမှလာသည့်နေရာကိုထည့်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့မလွယ်ကူပါ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cutie ကိုဖောက်တဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာတူးဆွသွားတော့မယ်။
မျက်ကန်းမျက်မမြင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည် ၀ န်ဆောင်ခွေးတစ်ကောင်လိုသည့်အခါ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ပြhusbandနာကသူမ၏ခင်ပွန်းသည်ခွေးများနှင့်မတည့်ပါ။
Wally Conron , လမ်းညွှန်ခွေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်မွေးမြူရေးမန်နေဂျာ သြစတြေးလျမှာခွေးတစ်ကောင်ကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့တယ် ဝန်ဆောင်မှုခွေး၏ပြီးပြည့်စုံသောစိတ်ထား နှင့်က hypoallergenic ကုတ်အင်္ကျီ။
သူသည်ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီသောခွေးနှစ်ကောင်ကိုရောနှောခဲ့သည်။ သူကကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည် Labrador retriever နှင့် Non- သွန်းလောင်းစံ ခူး ။ ထို့ကြောင့်နာမကိုအမှီ Labrador-Poodle သို့မဟုတ် Labradoodle ။
ထိုအောင်မြင်မှုအပြီးတွင် Wally Conron သည်နောက်ထပ်မျိုးပွားလိုသည်။
သြစတြေးလျရဲ့ Tegan ပန်းခြံနှင့် Rutland Manor ဝေါလီစတင်အဘယ်အရာကိုဆက်လက်အားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Labradoodles ကိုမွေးမြူရင်းနဲ့အမြဲတမ်းအင်္ကျီအမျိုးအစား၊
ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ developer တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ဒီမျိုးဆက်ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုသြစတြေးလျ Labradoodle ဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကိုသြစတြေးလျ Labradoodle စေသည်?
အကယ်၍ အခြေအနေနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုခုကိုပြည့်စုံပါကသြစတြေးလျား Labradoodle ကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။
Labradoodle မွေးမြူရေးသည် 5th Generation သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
အဆိုပါခွေးရဲ့မျိုးရိုး Labrador, Poodle နှင့်အမေရိကန် Cocker Spaniel ပါဝင်သည်
မိဘနှစ်ပါးမတူသောအခြားပေါင်းစပ်မျိုးကွဲများနှင့်မတူဘဲ Aussie Labradoodle သည်မျိုးစိတ်သုံးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Labradoodles ၏စဉ်ဆက်မပြတ်မျိုးပွားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်မွေးမြူရေး ဆိုလိုတာကသင် Labradoodle မိဘနှစ်ပါးစလုံးပိုင်ဆိုင်သော Labradoodles နှစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူတို့ထုတ်လုပ်သောခွေးပေါက်စများကြီးထွားလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုငါးကြိမ် (မျိုးဆက် ၅ ဆက်) ပြုလုပ်ပါ၊ သင်ရရှိလိမ့်မည် သြစတြေးလျ Labradoodle တစ် multigenerational crossbreed ။ ဒါကသူတို့ကန ဦး ကဒီဖောက်ထုတ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။
သင်ဤအံ့သြဖွယ်ခွေးလုပ်ဖို့လုံလောက်သောမွေးမြူရေးကြောင်းထင်လျှင်, သြစတြေးလျ Labradoodle ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖွဲ့အစည်းများရှိရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ဟာစုံလင်အောင်လုပ်ဖို့ဒီဖောက်သည်ထဲကိုပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့စရိုက်တွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။
လုပ်ဖို့သူတို့ ဂရုတစိုက်သည်အခြားဝတ်ရည်ကဆက်ပြောသည် မယ်လို့သော Labradoodle လိုင်းများသို့ ပိုပြီးနှစ်လိုဖွယ်စရိုက်များဆောင်ခဲ့ရမည် နှင့်ထိုခွေးဖြစ်ကြ၏:
Curly ကုတ်အင်္ကျီ Retriever
အမေရိကန် Cocker Spaniel
Labrador နှင့် Poodle၊ Aussie Labradoodle တို့ပါဝင်သည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောမိဘမျိုးဆက် ၆ မျိုး ။
မိဘမျိုးရိုးအားလုံးစားပွဲသို့ယူဆောင်လာရန်တစ်ခုခုရှိသော်လည်း အသုံးအများဆုံးရောနှော သြစတြေးလျ Labradoodle ကိုဖန်တီးရာမှာ Poodle, Labrador Retriever နဲ့ American Cocker Spaniel တို့ဖြစ်တယ်။
ဒီမျိုးဆက်ကိုတီထွင်သူများက American Cocker Spaniel ကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိပြီးသြစတြေးလျ Labradoodle တွင်သူတို့နောက်ဆုံးထည့်ထားသောခွေးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြားခွေးများထက် ပိုမို၍ တသမတ်တည်းသောစရိုက်များရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ငုပ်နှင့်ဤလှပသော Doodle ၏တသမတ်တည်း attribute တွေဆွေးနွေးကြကုန်အံ့။
ဒါဟာဘုံစကားပါပဲ ရူပအရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး သြစတြေးလျ Labradoodles သည်ပြီးပြည့်စုံစွာမျှသာဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှီခိုနေရသောကြောင့်သူတို့၏အသွင်အပြင်သည်သင်၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မည်။
သူတို့နှင့်အတူကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောကျပ်တိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့ပါပဲ ကြီးမားသောနှင့်ပတ်ပတ်လည်, မှောင်မိုက်အညိုရောင်မျက်စိ ဒါကမင်းကိုချစ်သွားစေမှာပါ။ သူတို့ထဲမှအချို့သည်မျက်လုံးအရောင်များပင် ရှိ၍ အနက်ရောင်ပယင်းမှသည်ဖျော့ဖျော့ဖျော့မျက်လုံးအရောင်အထိရှိသည်။ ပြီးတော့သူတို့တစ်တွေရှိတယ် ကြီးမားသော, စတုရန်း -shaped နှာခေါင်း ။
သြစတြေးလျ Labradoodle ရဲ့နှာခေါင်းအရောင်ဟာအနက်ရောင်၊ နှင်းဆီအရောင်ဒါမှမဟုတ် rosy brown / pink ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အင်္ကျီရဲ့အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားလိမ့်မယ်။
သြစတေး Labradoodles တစ် ဦး ရှိသည် စတုရန်း, stocky တည်ဆောက် နှင့်ရွေ့လျားမှုအတွက်အခါ topline အောက်ပါအတိုင်းပေမယ့်လုံးဝနောက်ကျောကျော်ကောက်မဖြစ်သင့်တဲ့အမြီးရှိပါတယ်။
သြစတြေးလျ Labradoodle ဘယ်လောက်ကြီးလဲ
ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးနေရာလွတ်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေသင်ကံကောင်းပါစေ။ အဆိုပါ Poodle မိဘကတည်းက သုံးအရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ် Aussie Labradoodle ကလည်းအလားတူပဲ။ သငျသညျလုပ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးကောက်သည်!
စံအရွယ် သြစတြေးလျ Labradoodles ၂၁ မှ ၂၄ လက်မအမြင့် (၅၃ မှ ၆၁ စင်တီမီတာ) ရှိပြီးအလေးချိန် ၄၅ မှ ၇၇ ပေါင် (၂၀ မှ ၃၅ ကီလိုဂရမ်) ရှိသည်။
အလယ်အလတ် သြစတြေးလျ Labradoodles ၁၇ လက်မမှ ၂၀ လက်မ (၄၃ မှ ၅၁ စင်တီမီတာ) ရှိပြီးအလေးချိန် ၃၀ မှ ၄၅ ပေါင် (၁၄ မှ ၂၀ ကီလိုဂရမ်) ရှိသည်။
သေးသေးလေးများ ရုံ cutest များမှာ! သူတို့သည် ၁၄ လက်မမှ ၁၆ လက်မသာ (၃၆ မှ ၄၁ စင်တီမီတာ) သာရှိပြီးအလေးချိန် ၁၅ ပေါင်မှ ၃၀ ပေါင် (၇ မှ ၁၄ ကီလိုဂရမ်) သာရှိသည်။
သငျသညျစိတျထဲမှာထားရန်ရှိသည် အထီးများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် အမျိုးသမီးခွေးထက်ပိုကြီးတဲ့ ။ သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ ဤတွင်သြစတြေးလျား Labradoodle အရွယ်အစားကိုအပြည့်အ ၀ အရွယ်ရောက်သည့်အရွယ်အစားကိုပြသသည့်ဇယားဖြစ်သည်။
အရွယ်အစားပြဇယား အမြင့် အလေးချိန်
21 မှ 24 လက်မ
(၅၃ မှ ၆၁ စင်တီမီတာ)
45 မှ 77 ပေါင်
(၂၀ မှ ၃၅ ကီလိုဂရမ်)
၁၇ လက်မမှ ၂၀ လက်မ
(၄၃ မှ ၅၁ စင်တီမီတာ)
30 မှ 45 ပေါင်
(၁၄ မှ ၂၀ ကီလိုဂရမ်)
14 မှ 16 လက်မ
(၃၆ မှ ၄၁ စင်တီမီတာ)
15 မှ 30 ပေါင်
(၇ မှ ၁၄ ကီလိုဂရမ်)
၎င်းတို့ကိုအရွယ်အစားသုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည် တိုက်ခန်း ဒါမှမဟုတ်က ပျမ်းမျှအရွယ်ခြံနှင့်အတူအိမ် ဒီခွေးပျော်ရွှင်စေရန်အလုံအလောက်နှင့်သင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးသည်မှာသူတို့သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျ Labradoodle ကုတ်အင်္ကျီနှင့်အရောင်
ဒီ fluffy pooch ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ cuddle ရဲ့ buddy ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလိုပဲငါတို့သိပေမယ့်မင်းမှာရှိတာသိလား အင်္ကျီသုံးမျိုး ?
သိုး - textured: ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်း။ တဖြည်းဖြည်းပွင့်လင်းသောသိုးမှသည်လှိုင်းများအထိနိုင်သည်။
သိုးမွှေးထိုးဆေး - သိုးသငယ်၏သိုးမွှေးကဲ့သို့ဖြစ်၏နှင့်ထိတွေ့ဖို့ဝါဂွမ်းကဲ့သို့ခံစားမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ Poodle နဲ့တူပေမယ့်အသားအရေမှအလွယ်တကူဖွင့်လှစ်မယ့်ပိုချော့မွေ့လိမ်ရှိပါတယ်။
ဆံပင်ပုံစံ ၎င်းသည်ဖြောင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသာတောက်ပသည်ဖြစ်စေ၊ ဆံပင်အမျိုးအစားသည်ခံစားမှုနှင့်ကြမ်းတမ်းပြီးခွေးမွှေးနံ့သာရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ Doodle ကိုဆံပင်တိုသို့မဟုတ်ရှည်သောဆံပင်များဖြစ်လိုလျှင်တောင်မှ၊ ဤအမျိုးအစားသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနိမ့်ပိုင်းဖြစ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီများရှိသည်။
သြစတေး Labradoodles လည်းတစ် ဦး အတွက်လာ အရောင်မျိုးစုံ အမှုန်၊ အဖြူ၊ apricot, ချောကလက်၊ အနက်ရောင်၊
သငျသညျသြစတြေးလျ Labradoodle ခွေးကလေးကိုရဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူအံ့သြသွားမှာမဟုတ်ဘူး အင်္ကျီအရောင်အပြောင်းအလဲများ။ သူရင့်ကျက်လာသောအခါမှောင်လာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
Aussie Labradoodle ရဲ့ Hypoallergenic ကုတ်အင်္ကျီကိုပြင်ဆင်ခြင်း
သင်၏သြစတြေးလျား Labradoodle တွင်မည်သည့်အင်္ကျီကိုပဲယူပါစေ ဦး စွာမိမိကိုယ်ကိုမေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးအားမည်သို့သောပုံစံမျိုးရှိစေလိုသနည်း။ 'နှင့်' သူ့ဝတ်ရုံဘယ်လောက်ကြာမလဲ ”
သြစတြေးလျ Labradoodle ရဲ့အင်္ကျီကိုစဉ်ဆက်မပြတ်နောက်ဆုံး 35 နှစ်တာကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီကတည်းကသူတို့ဖြစ်ကြသည် သွန်းလောင်းရတဲ့ထံမှဝေးကွာ တစ် ဦး Labrador ၏။
သူတို့က non- သွန်းလောင်းဖောက်နေသော်လည်း, သူတို့သည်နေဆဲလိုအပ်ပါတယ် ပုံမှန်ဖြီးလိမ်းပုံ။
သင်သည်သင်၏ Doodle ရဲ့အင်္ကျီကို brush နိုင်ပါတယ် တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ် Matting ကိုကာကွယ်ရန်အပြင်သားမွေးအားကျန်းမာစွာသန့်ရှင်းစေရန်။ သင့်ခွေးသည်အများအားဖြင့်အိမ်တွင်းနေလျှင်၊ ရေချိုးသည် လုံလောက်မယ်
ဝတ်စားဖြီးလိမ်းခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ခွေးတို့၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုအပ်သည်ကိုသင်သိလျှင်သတိရပါ သူ့ကို ၂ လမှ ၃ လတိုင်း groomer သို့ခေါ်သွားပါ လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောအင်္ကျီကိုထားရန်။
သငျသညျကိုစဉ်းစားမိလျှင်, shaggy ကြည့်လူကြိုက်အများဆုံးဆံပင်ညှပ်တစ် ဦး သို့မဟုတ်သြစတြေးလျ Labradoodles ကိုရှာဖွေသည်။
ကျနော်တို့ဖြီးလိမ်းပုံ၏ဘာသာရပ်အပေါ်နေစဉ်, သင်၏သြစတြေးလျ Labradoodle ရဲ့လက်သည်းတိုင်းချုံ့ဖို့မမေ့မလြော့ပါ နှစ်ပတ်မှလေးပတ် နှင့်သူ၏ brush သွား လစဉ် ။ နားရွက်အတွက်လေထုစီးဆင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်လစဉ်စစ်ဆေး။ အတွင်းပိုင်းဆံပင်ကိုမှန်မှန်ဖယ်ရှားပါ။
ALAA မှသြစတြေးလျား Labradoodles အတွက်အခြေခံဖြည့်စွက်ညွှန်ကြားချက်ကိုပြသထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
လက်ချပြီးခွေးတွေဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးမျိုးဆက် Labradoodle ပိုပြီး hyperactive ဖြစ်လေ့ရှိတယ်သိလား သြစတြေးလျ Labradoodles ကဒီလောက်ဝေးတယ်။ သူတို့က အေးအေးဆေးဆေး , မျှတသော , အလိုလိုသိ နှင့် ရင့်ကျက် ။ ဒါပေမဲ့သူတို့နေတုန်းပဲ အရမ်းပျော် ဒါကြောင့်မိုးလုံလေလုံသို့မဟုတ်ပြင်ပတွင်ကစားဖွင့်ခြင်းရှိမရှိနှင့်အတူန်းကျင်ဖြစ်!
Poodle နည်းတူသြစတြေးလျ Labradoodles ကလည်း အလွန်လိမ္မာသွက်လက်နှင့်ဖော်ရွေ ။ သူတို့ဟာလှပတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့အတူရှိနေရတာဝမ်းသာပါတယ် ဟာသ ရံဖန်ရံခါ!
ဒီဖောက်လည်းပါလိမ့်မယ် မိသားစုတွေအတွက်ကောင်းတယ် ကလေးများနှင့်အတူ ဒဏ်ရာများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သင့်ကလေးငယ်များအားသူတို့ခွေးကလေး (သို့) သင်၏သြစတြေးလျ Mini Labradoodle နှင့် ပတ်သတ်၍ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါ။
ဒါ့အပြင် Aussie Labradoodles ဆိုတာလည်းရှိတယ် သစ္စာ , အခြားခွေးနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူကောင်းသော သူတို့ရဲ့ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကိုပြသရန်မကြောက်ကြနှင့် ကြီးမြတ်သောလမ်းညွှန် နှင့် ကုထုံးခွေး - Labrador Retriever နှင့် Spaniel တို့၏မိဘများကဲ့သို့ပင်။
လေ့ကျင့်ခန်းမည်မျှလုပ်ရန်သြစတြေးလျ Labradoodle လိုအပ်သည်
မင်းရဲ့ Aussie Labradoodle ငြီးငွေ့လာရင်မလိုချင်ဘူး အပြုအမူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာနေ့စဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစွာပေးခြင်းဖြင့်သူ့ကိုပျော်ရွှင်စေသည်။
သြစတြေးလျား Labradoodle တွင်အလယ်အလတ်အဆင့်စွမ်းအင်အဆင့်ရှိသည် မိနစ် 30 မှ 40 မိနစ် တစ်ရက်လမ်းလျှောက်ဖို့လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။
အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ခြင်းများ မှလွဲ၍ သင်ခွေးများကိုပင်ခွေးပြေးထွက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ သြစတြေးလျ Labradoodles ရေကိုချစ်တယ် လည်း။ သင့်တွင်ရေကန်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်အိုင်သို့မဟုတ်ကမ်းခြေအနီးတွင်နေထိုင်ပါကသူ့ကိုယူလာပါ၊ သူသည်ရေကူးပြီးရေကူးရန်ရေငုပ်နေသည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။
သင်၏ခွေးကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရန်အချိန်မရပါကခြံစည်းရိုးခြံသည်သူနှင့်အတူလိုက်ကစားရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ဒီတက်ကြွတဲ့ဂိမ်းက Aussie Labradoodle အတွက်လိုအပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်မိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ ကိုလွယ်ကူစွာဖြည့်နိုင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပြင်သင်၏ Doodle သည်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုဝါးတာ၊ ပဟေ,ိအစရှိသည့်အတွင်းပိုင်းဖျော်ဖြေမှုများပေးသည် ကစားစရာများ ဥာဏ်ရည်ရှိသူ့ကိုစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဖောက်များအတွက်လူကြိုက်များထုတ်ကုန်အချို့ကိုဖြစ်ကြသည် Kong အစွန်းရောက် နှင့် အပြင်ဘက် Hound Nina Ottoson ခွေးအုတ်အားဆက်ဆံသည့် Puzzle Dog ကစားစရာ ။ သင်၏ Aussie Labradoodle ကိုရွေးချယ်စရာများစွာပေးခြင်းကသူ့ကိုငြီးငွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီးပရိဘောဂသို့မဟုတ်ဖိနပ်များကိုဝါးခြင်းမှလည်းသူ၏အာရုံကိုအာရုံလွဲသွားစေသည်။
သြစတြေးလျ Labradoodle လေ့ကျင့်
ဒီခွေးတစ်ကောင်နှင့်ပတ်သက်။ အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသူတို့ဖြစ်ကြသည် စမတ်နှင့်လေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည် ။ သူတို့သည်သင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သင်သင်ကြားပေးသည့်လှည့်ကွက်များကိုအချိန်တိုအတွင်းကောက်ယူနိုင်သည်။
သတိပေး! သင်၏သြစတြေးလျား Labradoodle ခွေးကလေးကိုအိမ်သို့ယူဆောင်လာချိန်မှ စ၍ သင်ကိုယ်တိုင်အိမ်၏မိသားစုခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်မိသားစု၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တည်ဆောက်ပါ။ သူသည်ကြီးပြင်းလာခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့်သင့်လျော်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရပါကဤမျိုးပွားသည်သင့်ကို ကျော်လွန်၍ ရိုင်းစိုင်းသောသဘောထားကိုမွေးမြူနိုင်သည်။
မြဲမြံစွာတည်ကြည်လော့ alpha ထိုအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ပါ။ သင်သေချာအောင်လုပ်ပါ တစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကပ် ။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်အပြုသဘောထားပါ။ သင်သည်မည်သည့်ခွေးကိုမဆိုလှုံ့ဆော်ရန်ရယူခြင်း၊ ဆုပေးခြင်းနှင့်ချီးကျူးခြင်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
တသမတ်တည်းနှင့်စိတ်ရှည်ပါ ။ သင့်ရဲ့ခွေးသို့မဟုတ်ခွေးကလေးတစ်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါလျှင် မတော်တဆမှုတစ်ခု သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကော်ဇောတွင်ကြမ်းတမ်းသောအသံသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုမသုံးပါနှင့်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါစေ။ အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများဘယ်တော့မှမကူညီပါလိမ့်မယ်။
ဒီခွေးပိုင်ရှင်က Teddy ကိုအားရကျေနပ်မှု၊ အားပေးမှုများပေးရင်းရိုးရှင်းတဲ့ညွှန်ကြားချက်များ၊
သင်သည်သင်၏ဖော်ရွေခွေးတစ်ကောင်ရဲ့စိတ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို, ဒါပေမယ့်လည်း Aussiedoodles ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုအစာကျွေးဖို့မသာသောကြောင့်, ဒီအံ့သြဖွယ်ဖောက်၏ခြုံငုံကျန်းမာရေးအပေါ်သွားကြကုန်အံ့။
Labစတြေးလျ Labradoodles တွင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးများရှိသော်လည်းခွေးပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့၏ခွေးကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းထက်ပိုပြီးတာ ၀ န်ရှိသည်။
Aussie Labradoodle သည်၎င်း၏မိဘများထံမှကျန်းမာရေးပြproblemsနာများကိုအမွေဆက်ခံသည့်အပြင်အရွယ်အစားသုံးမျိုးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်ရွေးချယ်သော Doodle ၏လိုအပ်ချက်များကိုသင်ဂရုပြုရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Mini Australia Labradoodle ကိုပရိဘောဂများမှခုန်ချခြင်း၊ လှေကားတက်ခြင်းနှင့်လှေကားတက်ခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောအရာများသည်ပူးတွဲပြproblemsနာများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်သူ့ကိုမည်မျှကျွေးမွေးရမည်ကိုသိရန်ကူညီနိုင်သဖြင့်သူအဝလွန်နေခြင်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုသင်မည်မျှချစ်ကြောင်းပြရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာမှာသူ့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော Active ကိုခွေးများအတွက်သင့်လျော်သောအစားအစာ
ဒါကြောင့်တိကျတဲ့အစားအစာကိုမရွေးချယ်ခင်၊ ခွေးစာ သင်၏ Aussie Labradoodle အတွက်အစားအစာပမာဏနှင့်အာဟာရမျှတမှုကိုသေချာစွာသိရန်သင်၏ vet ကိုအရင်မေးပါ။
သင့်ရဲ့သြစတြေးလျ Labradoodle ပေးပါ3ခွက်မှ2နှင့်တစ်နှစ်ခွဲ နေ့စဉ်ခွေးအစားအစာနှင့် နှစ်ခုအစားအစာများသို့ခွဲ ။
သင့်ခွေးအားမည်သည့်အချိန်တွင်ကျွေးသည်ကိုသင်သိလိုလျှင်သူသည်အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသဖြင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်တသမတ်တည်းဖြစ်နေသည်။ ပိုင်ရှင်အများစုလုပ်သောအရာသည်သူတို့၏ furry buddy ကိုနံနက်တွင်တစ်ကြိမ်နှင့်ညနေခင်း၌ကျွေးသည်။
သင်တစ် ဦး အိမ်လုပ်သို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအစားအစာကိုရွေးချယ်လျှင်သို့မဟုတ်ပင်လျှင် အရည်အသွေးမြင့်လူ့အဆင့်ခွေးအစားအစာ သင်လုပ်ရမှာကသူမဆီအဆီမလာအောင်သင်မွေးမွေးထဲကကောင်လေးကိုပေးတဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ပါ။
သင့်ရဲ့သြစတြေးလျ Labradoodle အဝလွန်လျှင်
တစ် ဦး ကထွားခွေးချစ်စရာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်အန္တရာယ်မှာသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရဲ့ကျန်းမာရေးချပြီးလိမ့်မယ်။ သူကအဝလွန်နေပြီဟုသင်ထင်လျှင်သူ၏နေ့စဉ်ခွေးစာ ၂ ခွက်မှ ၃ ခွက်ကိုသာမန်နှစ်ခုအစားသုံးမျိုးခွဲနိုင်သည်။
သင်၏သြစတြေးလျား Labradoodle သည်ထိုမေတ္တာရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်မည်မျှတောင်းပန်ပါစေ၊ သူ့ကိုစားပွဲအပိုင်းအစများနှင့်လူ့အမှိုက်များကိုမပေးပါနှင့်။
ခွေးတစ်ကောင်အတွက်အစားအစာတွေအများကြီးရှိပြီးပေါင်ပေါင်ကျအောင်ကူညီပေးတယ် ကျန်းမာသောအဆစ်များကိုထိန်းသိမ်းထားသည် အဝလွန်ခြင်းသည်သင်၏ခွေးရဲ့ mobility ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ကတည်းက။
သင်တို့သည်လည်းကပ်သင့်ပါတယ် ခွေးရယူထားသော ကြောင်းကယ်လိုရီအနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ အစားပန်းသီးသို့မဟုတ်မုန်လာဥကဲ့သို့သောသစ်သီးများကိုအစားထိုးစားသုံးပါ။
အဝလွန်သောသြစတြေးလျ Labradoodles အတွက်
ကျွန်ုပ်တို့မှာeatစတြေးလျ Labradoodles တွေအများကြီးစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုကြီးကြီးမားမားမထားနိုင်တဲ့အပြင်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာနိုင်တဲ့ခွေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ သင်၏ Doodle သည်စွမ်းအင်အမြောက်အများကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်၊ သို့သော်သူသည်နောက်ခံအကြောင်းရင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျကြောင်းသေချာစေပါ။
သူကပါးလွှာပေမဲ့ကျန်းမာနေမယ်ဆိုရင် pooch ကိုကိုယ်အလေးချိန်တက်အောင်ကူညီနိုင်မှာပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည် နောက်ထပ်ခွက်ထည့်ပါ မိမိအနေ့စဉ်အစားအစာသို့ခွေးအစားအစာ၏။ ဒီတော့ခွက် ၂ ကနေ ၃ ခွက်ကနေ ၄ ခွက်ထဲကိုတစ်နေ့နှစ်ခါသုံးခွက်လောက်စားနိုင်တယ်။
သင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ခွေးအစားအစာကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ် ခွေးများအတွက် လူကြီးများအစား။
သင်၏သြစတြေးလျ Labradoodle သည်မည်သည့်အစာနှင့်မည်မျှစားနေသည်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။ အစာစားချိန်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်မည်သည့်အရာကအလုပ်လုပ်သည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်သင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ နှင့်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေ့ကျင့်ခန်းများများရရှိသွားတဲ့သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ Doodle သည်ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ရှိ၊ မနိုင်ကိုသိရန်သူသည်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသင့်သည် ခြောက်လမှတဆယ်နှစ်လတိုင်း အလွန်ပါးလွှာသို့မဟုတ်အဆီဖြစ်ခြင်းမှပြန်သွားရှောင်ရှားရန်။
သြစတြေးလျ Labradoodle သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာသောမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏ဒီဇိုင်းဆွဲခွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုမည်သူမျှကြိုတင်မမြင်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှသည်ဤ Doodle ၏နောက်ခံအကြောင်းနှင့်မိဘ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကျန်းမာရေးပြaboutနာများကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏မည်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုမဆိုအနည်းဆုံးသို့မဟုတ်ပင်ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Crossbreeds သည်မိဘများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများကိုအမွေခံရပြီးသင်၏သြစတြေးလျ Labradoodle မှရရှိနိုင်သောအချို့သောအရာများမှာ -
သင်၏သြစတြေးလျ Labradoodle သည်ယားယံခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းများဖြစ်ပွားခြင်းရှိမရှိကိုလည်းသင်လေ့လာသင့်သည်။ ၎င်းသည်သူ၌ဓာတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာရှိသည်။
နောက်ကွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသင်၏ Aussiedoodle သည်သူ၏အစားအစာတွင်ပါ ၀ င်သောကောက်ပဲသီးနှံများသို့မဟုတ်ကြက်သားများနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရေပြားကိုယားယံစေရုံသာမကအစာခြေခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောသင့် Doodle ရဲ့အဖြစ်အရေးကြီးသောအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် အသက်နှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ။ ခွေးကလေးတစ်ကောင်လိုအပ်သည့်အစားအစာပမာဏသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသြစတြေးလျ Labradoodle အားသင်မည်မျှပေးသင့်သည်နှင့်ကွဲပြားသည်။
သင်အမြဲတမ်း hypoallergenic သို့ပြောင်းနိုင်သည် ခွေးစာ ဒါမှမဟုတ် ဆက်ဆံပါ သင့်ရဲ့ဓာတ်မတည် - Aussiedoodle သည်။ ၎င်းသည်သူ၏အင်္ကျီနှင့်အရေပြားသာမကဘဲအစာခြေကျန်းမာရေးကိုပါစီမံခန့်ခွဲပေးသည်။
အကယ်၍ သင်၏ Doodle တွင်မျက်စိဆေးထုတ်ခြင်း၊ သင့်တော်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးရှိပါက၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အခြားအရောင်များရှိပါက၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်သင်၏ vet နှင့်ရက်ချိန်းယူပါ။
သင်၏ doodle ကိုတတ်နိုင်သလောက်ကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းရန်သြစတြေးလျ Labradoodle သည်ပျမ်းမျှထက်ကျော်လွန်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချရသောတိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးတိုင်ပင်ပါ အသက် ၁၃ မှ ၁၅ နှစ်အထိသက်တမ်းရှိသည် !
သြစတြေးလျား Labradoodle နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောအချက်အလက်များသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယခုလေ့လာသင်ယူပြီးသောအခါသင်ရရှိနိုင်သောနေရာသို့သွားကြစို့။
ရောနှောထားသောမျိုးစိတ်များပါ ၀ င်ပါကသင်သုတေသနပြုသည့်အခါတိုင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးရမည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမျိုးပွားသူများ၏စံနှုန်းများကိုလိုက်နာသည့်မျိုးဆက်တစ်မျိုးကိုရှာဖွေသောအခါသင်သည်အထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။
သင် ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ သြစတြေးလျား Labradoodle ခွေးပေါက်စများကိုခွေးပေါက်စများမှမ ၀ ယ်ယူသူထံမှဝယ်ယူပါစေ။
သငျသညျထိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်မတော်တဆသူတို့ကိုထောကျပံ့ချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့အပြင်သင်၏ခွေးစိတ်ထားသို့မဟုတ်သူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြeventuallyနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည့်ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
သြစတြေးလျား Labradoodle ဘယ်လောက်ကျလဲ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Labradoodle အမှိုက်သရိုက်များသည်များသောအားဖြင့်ပျမ်းမျှခွေး ၈ ကောင်ရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်စျေးနှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အချက်များမှာမျိုးဆက်များ၊ မျိုးရိုးနှင့်တည်နေရာတို့ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့သြစတြေးလျ Labradoodle ခွေးတစ်ကောင်ကကုန်ကျတယ် $ 2,700 မှ $ 3000 ။
အဘယ်ကြောင့်သြစတြေးလျ Labradoodles စျေးကြီးပါသလဲ
သြစတြေးလျ Labradoodle သည်ဒီဇိုင်းဆွဲခွေးဖြစ်သောကြောင့်သာမက၎င်းသည်ကြောင့်ဖြစ်သည် မွေးမြူရေးစတော့ရှယ်ယာ ။
မျိုးပွားသူများသည်မျိုးဆက်သစ် Doodle ကို အသုံးပြု၍ မိဘများကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများစွာပြုလုပ်ပါက Aussiedoodle သည်စျေးကြီးသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Aussiedoodle သည်သင်၏ပျမ်းမျှမျိုးစပ်မဟုတ်သောကြောင့်မျိုးပွားသူများသည်ဤကဲ့သို့သောခွေးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ရန်အာရုံစိုက်ရန်သူတို့၏အချိန်၊ အပ်နှံမှုနှင့်ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။
ပြီးတော့ဒါကသြစတြေးလျ Labradoodles ကိုမင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုတန်ဖိုးရှိစေတယ်။ သင်တစ် ဦး အတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မယ် အရည်အသွေးမြင့်ခွေးတစ်ကောင်အဖော် တသမတ်တည်းနှင့်အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးတွေနှင့်အတူ။
သြစတြေးလျ Labradoodle မြိုးဆကျ
သင်က Aussie Labradoodle ခွေးကလေးကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အဖွဲ့ဝင်မျိုးဆက်များ အမေရိက၏သြစတြေးလျ Labradoodle အသင်းမှ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Labradoodle of America မှသင့်အားသူတို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည် မျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်များ ။
ဒါ့အပြင် Labradoodle နှင့်သြစတြေးလျ Labradoodle အမျိုးအစားကိုအဓိကထားသောအခြားမျိုးဆက်များမှာဒီမှာပါ။
Bunji သြစတြေးလျ Labradoodles (Midwest Michigan, US)
Labradoodles Archview (အီလီနွိုက်စ်၊ အမေရိကန်)
အမြင့်နိုင်ငံသြစတြေးလျ Labradoodles (စိတ်အားထက်သန်သောအမေရိကန်၊ NH, US)
သြစတေး Labradoodle (ကိုလံဘတ်၊ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ အမေရိကန်)
Lomond တောင်ကုန်း Labradoodles (စကော့တလန်၊ ယူကေ)
သြစတြေးလျ Labradoodles ကိုလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်း
အကယ်၍ သင်သည်သြစတြေးလျား Labradoodle ကိုလက်ခံရန်၊ ကယ်တင်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ၁၀၀% ထောက်ခံသည်။
သကြားထင်းရှူး Doodles (Amador County, California)
Daisy Hill က Labradoodles (တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်)
Doodle ရော့ခ်ကယ်ဆယ်ရေး (Dallas, Texas)
Hale ရဲ့သြစတြေးလျ Labradoodles (Central California)
သြစတြေးလျ Labradoodle လိုင်းများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဆက်လက်အားထုတ်ရန်နှင့်မျိုးပွားမှုကိုဂရုတစိုက်လိုက်နာရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ကလပ်များရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။
LAA - သြစတြေးလျ၏ Labradoodle အသင်း
IALA - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသြစတြေးလျ Labradoodle အသင်း
FTAA - အမေရိက၏သြစတြေးလျ Labradoodle ကလပ်
ဘာမှမ - ကမ္ဘာတစ်လွှားသြစတြေးလျ Labradoodle အသင်း
အလ္လာဟ် - သြစတြေးလျ Labradoodle အသင်းဥရောပ
ပြီးတော့သြစတြေးလျ Labradoodle ဟာစပ် (သို့) ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် အမေရိကန်ဂေဟစနစ်ကလပ် (AKC) ကဒီမျိုးကွဲကိုအသိအမှတ်မပြုပေမဲ့ Dog Inc of America Inc (DRA) ကအသိအမှတ်ပြုသည်။
အခြား Poodle ရောစပ်မှုများကိုသင်သိလိုပါသလား။ သြစတြေးလျ Labradoodle နဲ့သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုခြင်းကအလွန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် Doodles ၏အခြားမျိုးကွဲများကိုလည်းလေ့လာဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အကယ်၍ သင်က Poodle နှင့်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သောမျိုးစိတ်ကိုတကယ်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာရွေးချယ်စရာများစွာရှိလိမ့်မည်။
သြစတြေးလျ Labradoodle VS စံ Labradoodle
ဒီနှစ်ခုကြားကွာခြားချက်တစ်ခုကတော့သြစတြေးလျ Labradoodles မကျင့်သုံးတဲ့အချိန်ကအချို့သော Labradoodles ကိုချွတ်ပစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်မတည် ။
Labrador-Poodle ရောနှောခြင်းသည်လုံလောက်သောအာရုံစိုက်မှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမရရှိပါက၎င်းတို့သည်ဟောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝါးခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သြစတြေးလျ Labradoodles ဖြစ်ကြသည် အေးအေးဆေးဆေး ပျင်းသောအခါတက်ပြုမူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော် Labradoodles အလွန်ချစ်ခင်ဖြစ်ကြပြီးအလွန်ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှုခွေးဖြစ်ကြသည်။
သြစတြေးလျ Labradoodle VS Bernedoodles
Bernedoodle ခွေးကလေး အရင်းအမြစ် )
သြစတြေးလျ Labradoodles လိုပဲ .ရာဝတီ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် Bernes ဟာသူတို့ရဲ့ခွေးပေါက်စဘဝမှာခေါင်းမာမာရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှအဲဒီသဘောထားပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့သင်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
Bernedoodles လည်းမိုက်မဲသောဖြစ်ကြပြီးတစ် ဦး ပါစေ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မိသားစုခွေး ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်နိမ့်ကျတဲ့အတွက်တက်ကြွတဲ့မိသားစုနဲ့အဆက်ပြတ်အောင်လုပ်ဖို့အခက်တွေ့နိုင်တယ်။
သြစတြေးလျ Labradoodle VS Goldendoodles
တစ် ဦး က furry Goldendoodle
စိတ်ထားနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Goldendoodle သည်Labစတြေးလျ Labradoodle နှင့်အနည်းငယ်ဆင်တူသည်။
ဖော်ရွေ၊ လူမှုရေးနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုသည်၎င်းတို့အားလမ်းပြ၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကုထုံးဆိုင်ရာခွေးတစ်ကောင်အနေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ Golden Retriever-Poodle ရောစပ်သည် ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူကြီးမြတ် နှင့်လေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည်။
သင်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာတစ် ဦး တည်းထားခဲ့ပါလျှင်သို့မဟုတ်သင်ကလုံလောက်သောအာရုံကိုမပေးပါဘူးလျှင် Goldendoodles ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သြစတြေးလျ Labradoodle VS Sheepadoodles
သိုး ( အရင်းအမြစ် )
The ကွမ်းခြံကုန်း သူတို့သည်အသိဉာဏ်ရှိသောကြောင့်လေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသောမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Sheepadoodles ရွှင်လန်းဖြစ်ကြပြီးကောင်းသောစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စေ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီမျိုးပွားခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါသင်ရှာဖွေရမဲ့အရာအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အလွန်စိတ်ထား သို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ဉာဏ်ရည် , ခွေးအတွက်ကိုက်ညီမှု နှင့် ထိပ်တန်းထစ်ကုတ်အင်္ကျီ ။
ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်, ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရောက်ရှိရန်ရန်, သင်သြစတြေးလျ Labradoodle ရှိခြင်း၏အကောင်းအဆိုး cons အလေးချိန်ရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်။
ဤ Doodle သည်နေအိမ်များနှင့်မိသားစုများအတွက်သာမကဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသောလူများ - ၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွင်းရှုပ်ထွေးမှုမရှိခြင်းနှင့်အနံ့နည်းသူများအတွက်သင့်တော်သည်။
သိုးမွှေးနှင့်သိုးမွေးအမျိုးအစားဖြစ်သောပိုကောင်းသောကုတ်အင်္ကျီအမျိုးအစားများမှာမူအထစ်အငေါ့များနှင့်အမဲလိုက်လေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်နှင့်သင်၏ Aussie Labradoodle တို့သည်ဖြည့်စွက်ရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ဖို့လိုသည်။
နှင့်ဤခွေး နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုအကွာအဝေးလိုအပ်သည် - လမ်းလျှောက်မှအပြေး၊ ဝါးခြင်း၊ အလုပ်ကြောင့်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းအိမ်ထဲမှာအချိန်ဖြုန်းတာကိုပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်၊ ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ဒီခွေးတစ်ကောင်ကသင့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
သြစတြေးလျား Labradoodle ရောစပ်မှုသည်စမတ်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လိမ္မာပါးနပ်သောစိတ်ထားဖြင့်သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အစောပိုင်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အထုပ်၏ခေါင်းဆောင်သူသည်သင်၏ Doodle သည်သူ၏နေရာကိုသိစေပါလိမ့်မယ်သက်သေပြ။
သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီဖောက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် နူးညံ့သိမ်မွေ့ သငျသညျအဘို့အလိုရှိ၏ pooch!
သြစတြေးလျ Labradoodle ကိုသင်ဘယ်လိုထင်လဲ သင့်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ Aussie Labradoodles နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေအကြောင်းအားလုံးသိပြီးအကြံဥာဏ်တွေ၊ အကြံဥာဏ်တွေတောင်မျှဝေပါရစေ။
Corgi Golden Retriever ရောခွေးနှင့်ပါတ်သက်သည့်သင်၏နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်
black and tan ဂျာမန်သိုးထိန်း